ဟိုဟိုဒီဒီ ပြောင်းနေလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟိုဟိုဒီဒီ ပြောင်းနေလို့
Posted by moethidasoe on Jul 4, 2011 in Creative Writing, Health & Fitness, Short Story | 15 comments
လောကမှာ လူတွေက .. ပျောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါကို သိပ် ကြောက်ကြတယ် .. အထူးသဖြင့် ကူးစက်တတ်ပြီး ပျောက်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရောဂါမျိုးကိုတောင် ကြောက်တတ်ကြတယ် .. ကူးစက်တတ်တယ် .. မပျောက်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ရောဂါကျတော့ မကြောက်ကြပြန်ဘူး .. လူတွေက တစ်မျိုးပဲနော် ..
“ဆရာမ .. ကျွန်တော့်သမီးလေးက မွေးတုန်းက ၀၀ကစ်ကစ်လေး .. ဆရာမ သိပါ တယ် .. အခု တငွေ့ငွေ့ဖျားပြီး ပိန်လဲပိန်လာတယ် .. ကြည့်ပေးပါဦး”
ဟုတ်တယ် .. ကျွန်မက သူတို့ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန်လို ကုပေးနေတာ ဆိုတော့ သူတို့ မိသားစုအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါတယ် .. သူတို့ အိမ်နဲ့ ကပ်လျက်မှာ အဆုတ်တီဘီဖြစ်ပြီး ပြည်တည်နာအထိ ဖြစ်တဲ့လူရယ် .. သွေး ပွက်ပွက်အန်တဲ့ လူရယ် နှစ်ယောက် နေသွားတယ် .. ဆေးရုံကို ခဏခဏ တက်ရပြီး သွေးအန်တဲ့ လူက သေသွားပြီလေ .. အဲဒီအိမ်ကိုလဲ ဒီကလေးက ခဏခဏ သွားတတ်တယ် .. ဒီတော့ ဒီကလေးက တီဘီ ကူးစက်ခံရတာ ဖြစ်ဖို့ များတယ် .. ဒါ မိသားစု ဆရာဝန်ရဲ့ အားသာချက်ပဲ .. မိသားစုတွေရဲ့ အသေးစိတ်လေးတွေကို သိရတတ် တယ်လေ ..
“ရှင့်သမီး .. တီဘီဖြစ်ဖို့များတယ် .. ကလေးဆရာဝန်ကို ပြကြည့်ပါလား .. ဓါတ်မှန် ရိုက်ရင်လဲ အထူးကုကို ပြကြည့်ဖို့ လိုဦးမှာ ..”
“မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် .. ကျွန်တော်တို့မှာ မျိုးရိုး မရှိဘူး”
“ရှင်ကလဲ တီဘီဆိုတာ မျိုးရိုးလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး .. ကူးစက်တာ .. ရှင်တို့ အိမ်နား မှာ တီဘီရောဂါသည် ရှိနေတာ ရှင်လဲ သိသားပဲ .. အစကတည်းက ကလေးကို အဲဒီလူတွေနဲ့ ဝေးဝေးထားရမှာ အခုတော့ ကူးလောက်ပြီ ဆိုတော့ ကုဖို့ပဲ အရေးကြီး နေပြီ”
ဒီတစ်ခါတော့ သူ လက်မခံဘူး .. ဒါနဲ့ တခြားဆေးခန်း သွားပြတယ် .. အဲဒီဆရာဝန် ကလဲ လေးငါးဆယ်ရက် ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ တီဘီလို့ ထင်သွားပြန်ရော ..
နောက်တစ်ယောက်ကို ပြောင်းပြပြန်ရော.. နောက်ဆုံး ပြရင်းပြရင်းနဲ့ ကလေးအထူး ကုဆီကို ရောက်သွားပြန်တော့လဲ တီဘီလို့ ပြောတာနဲ့ ဗမာဆရာဆီ ရောက်သွားပြန် ရော .. အဲဒီတော့ ကလေးက အတော် ပိန်ကျသွားပြီ ..
“ရှင် .. အဲဒီလောက် ခေါင်းမာဖို့ မကောင်းဘူး .. ကလေးလဲ သိပ် ပိန်ချုံးကျနေပြီ .. ကြည့်လုပ်ဦး .. (အဲဒီတုန်းက အခမဲ့ကုတဲ့ စီမံချက် မ၀င်သေးဘူးလေ) .. ဓါတ်မှန် ပါလား .. ကလေးဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်တော့ ရိုက်ခိုင်းခဲ့မှာပေါ့ ..”
ဓါတ်မှန်ကို ပြတော့ တီဘီက ကလေး အဆင့်ထက် နည်းနည်း ကျော်နေပြီ .. ဒါနဲ့ ကလေးဆရာဝန် ရေးပေးခဲ့တဲ့ ဆေးနည်းကို ကြည့်ပြီး ဆက် ကုပေးရတယ် ..
ဒါကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေကို ပြောချင်တာက ဆရာဝန် တစ်ယောက်ယောက်ကို မိသားစုဆရာဝန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပြဖို့ ကောင်းတယ် .. နောက်ပြီး မိသားစု ဆရာဝန်က ဒါလုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုရင်လဲ တတ်နိုင်ရင် လိုက်နာဖို့ သင့်တယ် ..
အမြဲတမ်း အထူးကုချည်း သွားနေရင် သူတို့က ကိုယ့်အကြောင်း သိပ် သိတာ မဟုတ်ဘူး .. (ကောင်းတဲ့ မိသားစုဆရာဝန်ကို ရွေးချယ်ဖို့ကတော့ ရွာသားတို့ တာဝန်ပေါ့လေ)
(၂၀၀၅ အောက်တိုဘာလမှာ ရေးခဲ့တယ် .. ဒီအဖြစ်အပျက်က ၁၉၉၄ လောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ)
ရွာထဲမှာတော. ဗဟုသုတ တွေမနည်းရနေတာပဲ
ဆရာဝန်တွေရော စာရေးဆရာတွေရော လုပ်ငန်းရှင်တွေရော စုံနေတာပဲ ရွာလေးကတော်တော်
ဆရာဝန်လဲရှိတယ် သူနာပြုလည်းရှိတယ် ဆိုတော. ကျွန်တော်ရွှေဘိုသား
လည်း ဒို.သွေးသားတို. ဒို.ဆေးဝါးဖြင်.ကုသမည် ဆိုတဲ.ဆောင်ပုဒ်လက်ကိုင်ထားတဲ.
ကျွန်တော်က ဘိန်းတော ဆရာပေါ.ဗျာ
ဘိန်းတော က ဆရာ ဆိုရင် တော့ ကြောက်မိပေါ့ ကိုရွှေ ရေ ။ ဒေါက်တာ တွေ ရှိလာတော့ အရမ်း ကောင်းတာပေါ့ဗျာ ။ ကိုယ် သိချင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အမေးကလေး တွေ မေးလို့ ရတာပေါ့ ။ မဟုတ်ဘူးလား ဒေါက်တာ မိုးသီတာစိုး ရေ ။
အမြဲ ကုနေကျ ဆိုတော့ အထာ လည်း သိတယ် ပြောရမှာ အားနာ စရာလည်း မလိုဘူး.. အဲဒါမျိုးတော့ သဘောကျတယ်။
ဒေါက်တာခင်ဗျား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီပိုစ်အတွက် … ကျနော် ဒီလို ဆေးပညာပေး
အသိပညာပေး မျိုးစောင့်နေတာကြပါပြီ။ ဆက်ပြီး တင်ပေးစေလိုပါတယ်။
မိသားစုဆရာဝန်ဆိုတာက ကြာရင် တိမ်ကောသွားမလားတောင်မသိဘူး။
ဆရာဝန်များတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ GP ဆို သိပ်အဖက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
ချောင်းဆိုးလဲ အထူးကု ၊ နှာစေးလဲအထူးကုနဲ့ …။
တောမှာ ၊ ကျေးရွာတွေမှာကျတော့ ဆရာဝန်က ရှားမှရှား ။
အဲဒီတော့ မိသားစုရမ်းကု ပဲ အားကိုးရပြန်တယ်။
လူအမျိုးမျိုး ရောဂါအထွေထွေ ပဲလေ…။ တစ်ချို့က ရောဂါကင်းချင်ကြတယ်..။ ရောဂါမဖြစ်အောင်တော့ မနေတတ်ကြဘူး..။ သူတို့ ဒိရောဂါဖြစ်နေပါတယ် ဆိုတာကို လက်မခံချင်ကြဘူး..။ ဒီတော့ ဟိုဟာကောင်းနိုနိုး ဒိဆရာကောင်းနိုးနိုးနဲ့ ဆရာများ သားသေ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ..။ တစ်ချို့ ဆို ပညာမတတ်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး..။ ဗဟု သုတမရှိလို့လည်း မဟုတ်ဘူး..။ ဒီရောဂါ ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကို သူတို့ အတ္တ စိတ်က လက်မခံတာ..။ ဒီရောဂါ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမဲ့ဆရာလိုက်ရှာတာ…။ တစ်ခါတစ်လေကျ သနားစရာတောင်မကောင်းဘူး..။ ဘေးက ၀င်ပြီး ရှင်းပြတဲ့သူတေတာင်ရန်လုပ်ချင်သေးတယ်..။ သူတို့က
ဘာပဲပြောပြော အရေးကြုံရင် အကြံပေးဆွေးနွေးနိုင်ဖို့၊ အကူအညီရဖို့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်လောက်တော့ ရှိသင့်တာ အမှန်ပဲ
ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာရေ တီဘီကို တချို့က မျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ ထင်နေကြတယ်… ။ တီဘီရှိရင်လည်း လူတွေက စကားပြောတာတောင် မသိမသာလေး ခွာပြီးစကားပြောကြတာ မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်… ။ တီဘီရှိလည်း အရမ်းကြီး မတုန်လှုပ်ပဲ ဆေးမှန်မှန်သောက်မယ်ဆို ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ … ဆေးသောက်ပြီး ပြန်စစ်ရမဲ့ အသိတော့ တီဘီဆေးသောက်သူ တချို့မှာ မတွေ့ရဘူးဒေါက်တာ .. ။ ဆေးကို မှန်မှန်သောက်သုံးတာနဲ့ တာဝန်ကျေပြီလို့ သတ်မှတ်ထားပုံရပါတယ်… ။ ဆေးသောက်ပြီး ပြန်စစ်လို့ ပိုးမတွေ့မှာ ပျောက်ကင်းတယ်လို့တထစ်ချ ယုံကြည်ရမှာဆိုတဲ့ အသိ အ တော်များများမှာ မတွေ့ရလို့ ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ … ။ နောက်ပြီး ကျွန်မ လေ့လာမိသလောက်တော့ တီဘီရောဂါသည် အတော်များများက တီဘီပိုင်း စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်နေမယ် … ဖျားနာတာ မရှိလျှင် တီဘီမှန်းမသိသာပါဘူး ..နောက်ပိုင်း ချောင်းတွေ အဆတ်မပျက်ဆိုးလာမယ် … အဆုတ်တွေပိတ်လာမယ်ဆိုတော့မှ ဟိုဟာလိုလို ဒီဟာလိုလို တီဘီစစ်မှ တွေ့ကြတာများတယ်နော်… ။
လူကောင်းတယောက်ပေမဲ့ တီဘီရောဂါပိုးဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား မသိဘူးနော်… ကိုယ်ထဲရှိနေပေမဲ့ … ကိုယ်ခံအားကျတဲ့ အချိန်မှ ရောဂါ လက္ခဏာပြတတ်တာဆိုတော့ … လူကြားထဲ သွားလျှင်တောင် ကာကွယ်ဖို့ ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်နော်… ။
နည်းနည်း ခွာပြီးနေတယ် ဆိုတာတော့ ..လက်ခံနိုင်လောက်ပါတယ် ..ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တီဘီဆိုတာ လေထဲက ကူးတာလေ .. တီဘီဖြစ်တဲ့လူက သူ့ဖာသာသူ လက်ကိုင်ပ၀ါနဲ့ ကာထားရင်တော့ .. မလိုပါဘူး .. တို့ ကျောင်းတက်နေတုန်းကလဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သလိပ်ထဲမှာ ပိုးတွေပါတော့ သူကိုယ်တိုင် လက်ကိုင်ပ၀ါ ဆောင်ထားပြီး နှာချေ ချောင်းဆိုးတိုင်း ကာထားတယ် .. သူ့ ကိုယ်ပိုင် အသိနဲ့ပေါ့ ..
ပြန်စစ်ဖို့ အသိ မရှိတာထက် စစ်ဖို့ ပြောဖို့က ဆေးပေးသူ (အခုဆိုရင် စီမံချက်အရ ဆေးလိုက်ဖြန့်တဲ့ လူငယ်တွေ ရှိတယ်)က ပြောနေဖို့နဲ့ လိုက်လံ စစ်ဆေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ် ..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူနာတွေကလဲ သူ့ အိမ်စီးပွားရေးအတွက် လုံးပမ်းနေရတော့ မေ့တတ်တာ သဘာဝပါ
မိသားစု ဆရာဝန်ဆိုတာ မြန်မာမှာတော့ သိပ် အလေးမထားကြသေးဘူး ..
ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာ လူနာတိုင်းဟာ စစချင်း မိသားစုဆရာဝန်ကိုပဲ တွေ့ခွင့်ရှိတယ် .. အထူးကု ဆိုတာ မိသားစု ဆရာဝန်က စနစ်တကျ လွှဲအပ်တဲ့ လူနာကိုပဲ လက်ခံကြည့်ရတာ ..
ဆေးရုံမှာဆိုရင်လဲ အ၀င်ဝမှာကတည်းက အထူးကုနဲ့ ပြသင့်သလား .. ရိုးရိုးကုနဲ့ပဲ ပြသင့်သလားဆိုတဲ့ screening လုပ်တဲ့ နေရာကို ဖြတ်ကျော်ပြီးမှ အထူးကုဆီ ရောက်ရတာ
မြန်မာပြည်မှာတော့ အဲဒီစနစ် မရှိသေးလို့ အထူးကုတွေဆီမှာ မလိုအပ်ပဲ လူနာတွေ ပုံနေတာ ..
နောက်ပြီး ရိုးရိုး သမားတော်နဲ့ ပြရင် လုံလောက်ရဲ့သားနဲ့ နှလုံးအထူးကု တို့ အဆုတ် အထူးကုတို့ ဆီမှာ လူနာတွေ သွားပုံနေတာ (ဥပမာ ရေးပြတာနော်) များနေတယ် ..
မကြာခင်မှာ မိသားစုဆရာဝန်တွေရဲ့ အရေးပါပုံကို သိလာကြမှာပါ .. လာမယ် (ကြာမယ်) ပေါ့
ကျွန်မတခု ထပ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် ဒေါက်တာ..
တီဘီဆေးက အရမ်းပြင်းတာ အားလုံးပဲ သိထားကြပါတယ်… ကြံ့ခိုင်တဲ့ လူဆိုလျှင်ဆေးသောက်လိုက်တာနဲ့ သိသိသာသာ ဆံပင်တွေ ကျွတ်လာတယ်… အသားရည်မွဲခြောက်လာတယ်.. မစားနိုင်မသောက်နိုင်နဲ့ ခံတွင်းပျက်ပြီး ပိန်လှီလာတာ များပါတယ်… ။ ရောဂါကြောင့်လား ၊ ဆေးကြောင့်လားမသိပေမဲ့ … တီဘီဝေဒနာရှင်တွေကတော့ … အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး စားချင်သောက်ချင်စိတ် မရှိတာကြောင့်ပါတဲ့… ။ ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ တီဘီဆေးကို …. တီဘီမဟုတ်ပဲ … အဆုတ်မှာ တစ်ခုခုလေး ၊ အနာဆာလေးရှိမယ်… ၊ တခြား အဆုတ်နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေမှာလည်း တီဘီဆေးသုံးတာ တွေ့ရပါတယ်… အထူးသဖြင့် ဆေးရုံမှာပါ … ။ မျှော့မျှော့လေးကျန်တဲ့ လူနာကို တီဘီဆေးပြင်းတိုက်တဲ့ အခါ ဒဏ်မခံနိုင်လို့ … သေရှာတာပါပဲ … ။ တချို့ ပါးနပ်တဲ့ လူနာရှင်တွေကတော့ … သူများဆီက စနည်းနာထားဖူးလို့ … တီဘီဆေး ၊ ဆေးရုံမှာ တိုက်တဲ့အခါ … လူနာကို မတိုက်ပဲ သိမ်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်… ။ ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ ဆေးကို တီဘီမဟုတ်ပဲ တိုက်တာ … ရောဂါရဲ့ ဆက်နွယ်မှူကြောင့်လား ၊ စီမံချက်ကြောင့်လား သိပါရစေ ။
ဒီလို ဗဟုသုတ ရမယ့် စာလေးတွေတင်ပေးတဲ အတွက်ကျေးဇူးပါဒေါက်တာရေ …
မိသားစုဆရာဝန်ဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ …
အမြဲကုနေကျဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုတစိုက် အကြံပေးလို့ရတာပေါ့နော် …
တီဘီဆေး ပေးတယ် မပေးဘူး .. ပေးသင့်တယ် .. မပေးသင့်သေးဘူး ဆိုတာ လူနာ တစ်ယောက်စီပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် .. ဒီလူနာအတွက် တီဘီက အရေးကြီးနေသလား .. အခြားရောဂါက အရေးကြီးနေသလား .. ဘယ်ဟာကို အရင်ကုသင့်သလဲ ဆိုတာလဲ လူနာတစ်ယောက်စီပေါ်မှာပဲ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချက်ပါ ..
ဒါတွေကို ဘေးကလူတွေ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ..
ဒီအတွက်ကြောင့် ဆရာဝန်အပေါ်မှာ ယုံကြည်သင့်သလို .. ယုံကြည်လောက်တဲ့ ဆရာဝန်လဲ ဖြစ်မှပါ .. ဆရာဝန်ဆိုတာကလဲ စကားပုံကို အကာအကွယ် ယူတာ မဟုတ်ပေမယ့် .. မသေသော ဆေးသမား ဆိုတာ မရှိတတ်ပါဘူး .. ကံ စိတ် ဥတု အာဟာရ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းနေတဲ့ လူနာကို အလိုက်သင့် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတဲ့နေရာမှာ ကံ ကုန်နေတဲ့လူအတွက် ဘယ်လောက် ကြိုးစားကြိုးစား .. သေသွားမျာ ..
ကျန်တာတွေကိုတော့ ဆရာဝန်တွေ .. ဆေးသမားတော်တွေ ပြင်ပေးနိုင်မှာပါ ..
တီဘီဆေးက အတော်ပြင်းပါတယ် .. လေးမျိုးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ် .. အရင်က နှစ်မျိုးထဲနဲ့ ကုခဲ့ကြတဲ့ အချိန်မှာ တစ်နှစ်ခွဲလောက် အချိန်ယူ ကုရပါတယ် .. အခုတော့ ဆေးတိုးတဲ့ တီဘီဆို ခြောက်လနဲ့ ပျောက်ပါတယ် .. ဆေးမတိုးတဲ့ တီဘီဆိုရင်တော့ အခြား ဆေးပေါင်းတွေနဲ့ ကုရပါတယ် .. ပုံမှန်သောက်ဖို့ လိုတဲ့အတွက် ရက် မပျက် သောက်ဖို့ လိုပါတယ် .. လူနာက ကိုယ့်သဘောနဲ့သာ ဖြတ်လိုက်ရင် နောင်မှာ ဆေးမတိုးတဲ့ တီဘီဖြစ်လာကြမှာ ..
အဲဒီအခါမှာတော့ သိပ် အကုန်အကျများတဲ့ ကုထုံးကို သုံးရတော့မှာမို့လို့ .. အခမဲ့ကုသခွင့်တော့ ရမှာ မဟုတ်နိုင်တော့ပါ
ကျွန်မအသိတွေထဲကရော .. ဖိုးဖိုးပါ ဆေးရုံတက်ရတုန်းက တီဘီမရှိပါပဲ တီဘီဆေး တိုက်မဲ့အစီစဉ် ကြုံခဲ့ဖူးတာကြောင့် မေးကြည့်တာပါ … ဖိုးဖိုးကိုလည်း ဆေးမတိုက်ပဲ တီဘီဆေးတွေ သိမ်းထားခဲ့တာပါ … ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖေ နေမကောင်းဖြစ်တော့ သမီးလုပ်သူကလဲ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် မအားနဲ့ဆိုတော့ အဖေက မပြောဘူး၊ ယောက်ျားသားတစ်ဦးဆိုတော့ မိန်းမနဲ့ သမီးကိုလဲ ဖွင့်မပြောပဲ ကြိတ်မှိတ်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ သူမနေနိုင်လို့ ဖွင့်ပြောတော့မှ ကိုယ်ပူချိန်တွေ တအားမြင့်နေတာ သိကြပါတယ်။ ဒီတော့မှ စိတ်ပူပြီး ဆေးခန်းပြတော့ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးတွေသောက်ပြီး နဲနဲသက်သာ သလိုရှိပေမယ့် ကိုယ်ပူက ပြန် ပြန် တက်လာတော့ သူတို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အထူးကုဆေးခန်း ကို ပြပါတယ်။ အဲဒီမှာ TB suspect ဖြစ်တယ်ဆိုလား မသိဘူး။ TB ဆေးတွေပေးပါတယ်။ သူ့အဖေက ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူလဲမဟုတ်၊ TB ရောဂါသည်နဲ့ နီးနီးစပ်စပ် နေတဲ့ သူလဲ မဟုတ်၊ ချောင်းဆိုးရောဂါရှိနေတာလဲ မဟုတ်ဆိုတော့ သူ့သမီးက ဘ၀င်မကျပါဘူး။ မသောက်စေချင်ပါဘူး။ သူ့အဖေကလည်း ဆရာဝန်က စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်လို့ပေးတာဆိုပြီး ကုကြည့်မယ်ဖြစ်ရော။ အဲဒီမှာ သမီးနဲ့ အဖေ စကားအခြေအတင်တွေဖြစ်ပြီး သမီးက လက်လျော့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီ TB ဆေးတွေသောက်တော့ သက်သာသလိုလိုတော့ရှိပြီး အခြား reaction တွေပြလာပါတယ်။ ဒါနဲ့သမီးက ဆက်မသောက်ဖို့နဲ့ ဆရာဝန်ပြန်ပြဖို့ပြောတော့ အဖေက တချို့ဆေးတွေက ဆေးပတ်လည်အောင်သောက်မှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်..ဘာညာ..ပေါ့ဆိုပြီး သမီးစိတ်တိုင်းကျအောင် ဆရာဝန်ကို ပြန်ပြပါတယ်။ ဆရာဝန်ကလဲ ဆက်သောက်ဖို့ပဲ ညွှန်ပါတယ်။ သူ့အဖေကလဲ သူ့ရောဂါကို ဆရာဝန်လက်ထဲ ၀ ကွက်အပ်ပြီး ကုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလားမသိပါဘူး၊ TB ဆေးတွေ ဆက်သောက်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမီး နဲ့ အဖေနဲ့ တော်တော်ကို စကားများရပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်းတက်လိုက်၊ သက်သာသလိုဖြစ်ပြီး ပြန်ဆင်းလာလိုက်၊ အိမ်ရောက်ရင် ကိုယ်တွေပူလိုက်၊ ဆေးခန်းပြန်တက်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး တလလောက်အကြာမှာ ဆုံးသွားပါတယ်။ ဘာရောဂါလို့တောင်မသိလိုက်ရပါဘူး။ ဆုံးတဲ့အထိ TB ဆေးတွေ သောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဖေဟာ ရောဂါကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ဘူးပါဘူး။ အပရိက လောက်ပဲဖြစ်တတ်တာပါ။ ဖြစ်လာရင် လဲဆေးခန်းသွားပြီး ကုနေတဲ့သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာဆေးနဲ့ပဲ သူ့ရောဂါတွေက ပျောက်နေတာပါ။ ဒီတခါပဲ အနောက်တိုင်းဆေးနဲ့ ကုဖို့ သူကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလားဖြစ်ပြီး ကုသခံခဲ့တာပါ။ ဆရာဝန်စကားကိုလဲ လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ သူ့သမီးဆိုတာလေ ပြောလို့ကိုအဆုံးပါဘူး။ reaction တွေပြလာလို့ ပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာ ဆက်သောက်ဖို့ ညွှန်တဲ့ ဆရာဝန်ကိုရော၊ ဆက်သောက်တဲ့ သူ့အဖေကိုရော၊ တနုံ့နုံ့နဲ့ ကြေကွဲရလွန်းလို့ပါတဲ့။
TBဆေးတွေက စမသောက်ခင်ကတည်းက ဆိုးကျိုး ၊ ကောင်းကျိုးတွေကို လေ့လာသင့်ပါတယ် ။ တီဘီ ဆေးကရက်ရှည်စွဲသောက်ရမှာမို့ သောက်ပြီး ပျက်ကွက်တာထက်စာလျှင် မလိုအပ်ဘူးထင်ကတည်းက စမသောက်သင့်တာပါ ။ … ဖိုးဖိုးတုန်းက ယိုင်နဲ့ နဲ့ လေးကို တီဘီဆေးတိုက်မယ်ဆိုတော့ အားလုံး တညီတညွှတ်ထဲ ဖွက်ထားဖို့ သဘောတူရာကနေ ဆေးရုံက ဆင်းပြီး တနှစ်ခွဲလောက် မိသားစုနဲ့ နေသွားနိုင်ခဲ့တယ် … ။ ဆေးမတိုက်ခဲ့လို့ ဆိုတဲ့ နောင်တမျိုး လုံးဝ မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး … ။ ဆေးသောက်လျှင်တောင် တလတောင် မခံနိုင်မှာ ဆိုးလို့ပါ ။